ဒီchallengeကို တစ်နေ့လျှင် စာဖတ်ဝါသနာ ထုံတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ တစ်ပါတ်ဆိုတော့ သူငယ်ချင်း ခုနှစ်ယောက်ကို ခေါ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။ မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ပြီးတော့ စာပေကို မြှင့်တင်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ် ခင်ဗျ...။❤❤❤
**ဟုတ်ကဲ့။ တတိယနေ့အတွက်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်လာအောင် အစပျိုးပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး ဆရာ​လည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာ လင်္ကာရည်ကျော်ရဲ့ နေဝင်အိပ်တန်းတက် ဆိုတဲ့ ရသ စာအုပ်လေး ပါဘဲခင်ဗျာ...။????❤❤❤
ဒီစာအုပ်လေးကို ကျွန်တော် ရသစာပေတွေ စတင်ဖတ်မိချိန်၊ ကိုးတန်းကျောင်းသားဘဝ၊ စာကြည့်တိုက် သွားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ စတင်ငှားရမ်းမိတော့ အလွန်သဘောကျသွားမိတာပါ။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ ဆရာ့အရေးအသားတွေကို အလွန်နှစ်သက်မိပြီး စာဖတ်ဝါသနာ ပါသွားတဲ့အထိဖြစ်အောင် ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ????❤
ဆရာ့ပရိတ်သတ်တွေရှိရင်လည်း ဆရာ့ရဲ့ အရေးအသားတွေက ကျစ်လျစ်ပြီး ခိုင်ခံ့တာကို သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ ဆရာ့ရဲ့စာအုပ်တွေတိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း အကြောင်းအရာ​တွေ ဇာတ်ကောင်တွေကလည်း ဆရာ့ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်လောက အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာ မှီငြမ်းပြီး ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးစိတ်သန်း​တွေကိုလည်း ထပ်လောင်း အားဖြည့်ထားတော့ အလွန်ကိုမှ ပီပြင်လှပါတယ်။❤????‍♂️
ဒီစာအုပ်က ကျွန်​တော် ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝဆ်ိုတော့... ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် (2017/18)တုန်းက ဖြစ်မယ်... ရုပ်ရှင်ကားကြီးထွက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့... ပြေတီဦး၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်၊ ပိုင်ဖြိုးသုတို့က နေဝန်အိပ်တန်းတက်ရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်သုံးဦးနေရာမှာ ပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်...။????????
ကျွန်တော် ကိုးတန်းအရွယ် ဒီဝတ္ထုလေး စဖတ်မိတော့ ရုပ်ရှင်အ​နေနဲ့ ရိုက်ရင် အတော်အဆင်ပြေ အတော်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိပါသေးတယ် (ဆရာ့ရဲ့ ကြိုးကြာ ကလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ပြီး အောင်မြင်မှုရခဲ့တာဆိုတော့)။ တကယ်လို့များ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငါအသေအချာကို သွား ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီး စဥ်းစားထားမိတာ တကယ်ပါ။ တကယ်တမ်းလည်း ရုပ်ရှင်ကားကြီး ဖြစ်လာတော့ ဟော... အကြောင်းက တိုက်ဆိုင်ပါဘိနဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ ဖြစ်နေရတယ်လို့ ????။ အခွင့်မရခဲ့လေတော့... ခဲလေသမျှလည်း သဲရေကျ ဆိုသလိုပါဘဲဗျာ..????။ အခုထိလည်း မကြည့်ရသေးပါဘူး...????။
ကျွန်တော့်ရဲ့ မောင်မင်းသွေး (ရင်တွင်းဖြစ်)
ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်း ကြားဖြတ်ခင်းလိုက်လို့ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတောင် ချော်နေပါပီ...။????
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ... ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော့် personalအနေနဲ့ ပထမဆုံး စတင် ကြိုက်နှစ်သက် ခဲ့ရတဲ့ ဝတ္ထုလည်းဖြစ် ဆရာ့ရဲ့ပရိတ်သတ် တစ်ဖြစ်လည်း ဒီစာအုပ်လေးကို ကျွန်တော့်ရဲ့ စာပေကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတို့ထဲက မဖတ်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဖတ်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်ပြလိုက်ရရင်းနဲ့ ဆရာ့ရဲ့စကားလေးကို ယူသုံးရရင်ဖြင့်..........................................
စာဖတ်ရတာကို နှစ်သက်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အနေနဲ့ ဒီchallenge​လေးကို လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ပြီး စာပေကို အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတတ်နိုင်တဲ့ နည်းနဲ့ မြှင့်တင်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျ...။
စာကြွင်း။ ။ အမှားတွေ ပါတဲ့ကြားက သည်းခံ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ...။ accထဲမှာ စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်း များများစားစားနဲ့ မသိတာရယ်၊ တစ်ချို့ အသိတွေကလည်း အလုပ်တွေရှိနေ​သေးတော့ ဒုက္ခ မများစေချင်တာကြောင့် ဒီနေ့အတွက် challenge အနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မ​ခေါ်တော့တာကို နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ...။
Publisher Name: နန်းဒေဝီစာပေ